Barcelona Oo Juventus U Soo Bandhigtay Heshiis Isku Badalasho Ah – banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Barcelona Oo Juventus U Soo Bandhigtay Heshiis Isku Badalasho Ah – banaadirsom
Barcelona Oo Juventus U Soo Bandhigtay Heshiis Isku Badalasho Ah – banaadirsom
Barcelona ayaa ka fiirsaneysa inay heshiis is dhaafsi ah oo lama filaan ah la samayso banaadirsom Juventus Iyada oo doonaysa in ay Antoine Griezmann Juventus kaga badashaan xiddiga Paulo Dybala si ay u dhimaan mushaharka badan.
banaadirsom Barcelona ayaa ku dhibaatoonaysa dhanka mushaharka iyada oo kooxdu doonayso in ay iska iibiso xiddigaha ugu mushaharka badan iyada oo uu Griemann yahay xiddiga 2-aad ee ugu mushaharka badan kadib Messi.
banaadirsom Barcelona ayaa doonaysa in ay iska iibiso Griezmnann Halka Dybala lala xidhiidhinayo in uu ka tagayo banaadirsom Juventus.
Wargayska L’Equipe ayaa haatan sheegaya in ay banaadirsom Barcelona dhigeeda Juventus u soo bandhigtay xiddiga Griezmann si ay dhankooda uga helaan xiddiga Dybala inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Previous articleMaxaadan Ogeyn oo xalay ka dhacay Xeebta Liido Ee Magaalada Muqdisho?
Next articleWararkii ugu danbeeyay Diyaarad waday 45-ruux oo Shil ku gashay Ceelwaaq.